Microsoft jiri ekwentị gị nwalee ịkpọ egwu na mobile | Gam akporosis
Ngwa ekwentị ekwentị Microsoft na-enye gị ohere ijikwa egwu gị na ekwentị gị na PC gị
Eziokwu bụ na Microsoft na-arụ nnukwu ọrụ na ngwa dịka Ekwentị gị nke na-enye anyị ohere ịchịkwa egwu ahụ hapụ ya ka ọ gbanye na mobile anyị site na PC.
Otu Microsoft na-elekọta nyekwuo ndu a nnukwu ngwa, na-amalite ule site na njirimara nke a ga-ejikọ isiokwu ọdịyo a na-egwu na mkpanaka na ngwa ekwentị gị na PC, nke mere na anyị nwere windo playback na ihuenyo nke Windows 10 kọmputa anyị.
Microsoft amalitela ịnwale nke a Njirimara ohuru na uzo ochie nke Windows 10 a na-atụ anya na ọ ga-adị na izu ole na ole na-abịa. Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ a ga-esi mekọrịta isiokwu ndị a na-akpọ na ekwentị anyị na ngwa ekwentị gị na Windows 10 PC gị.
Site a Obere ihe ọkpụkpọ ị nwere ike ijikwa playback nke mere na ihe niile dị mma nke ukwuu. A ga-egosipụta ma mekọrịta aha nke egwu na mkpuchi album ahụ, na njikwa anyị nwere ike ịchọta ụdị egwuregwu, nkwụsịtụ, nke gara aga na nke na-esote.
Enwekwara nhọrọ igbanwe n'etiti uzo di iche iche na egwu egwu nke anyi tinyego na mobile. Yabụ, ị ga-enwe ohere nke jikwaa imirikiti egwu egwu dịka Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiaomi Egwu na Google Podcast. N'oge a enweghi ike ijikwa vidiyo YouTube na Audible.
Ndị a ngwa ga-emelitere iji tinye njikwa playback si gam akporo ngosi mmanya. Microsoft na-arụ ọrụ na ngwa a iji weta ikike mee ma nata oku na ọbụna ihuenyo mirroring na gam akporo.
Nnukwu ihe ọhụụ sitere na weta na ekwentị ekwentị gị ikike ijikwa ọkpụkpọ Egwu dị na mkpanaka gị na PC gị. Oh, ma site na ụzọ, Microsoft ga-agụnye ozi gbasara COVID-19 na ọchụchọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa ekwentị ekwentị Microsoft na-enye gị ohere ijikwa egwu gị na ekwentị gị na PC gị
Sọpụrụ 9C, Sọpụrụ 9A na Sọpụrụ 9S: Ekwentị ọhụụ ọhụụ atọ nwere gam akporo 10